Koke oo rajeeyay in Cristiano Ronaldo uu saamayn ku yeelan doono khilaafka kala dhexeeya madaxda Real Madrid – Gool FM
(Spain) 12 Juunyo 2018. Khadka dhexe kooxda Atletico Madrid Koke ayaa wuxuu ka warbixiyay sida uu u rajeenayo in ay saameyn ugu yeelato Cristiano Ronaldo khilaafka kala dhexeeya maamulka kooxda Real Madrid, kulanka ay isku arki doonaan koobka aduunka xulalka Portugal iyo Spain.
Kadib marka ay Real Madrid ku guuleesatay finalkii Champions League Cristiano Ronaldo ayaa ka warbixiyay in ay suuragal noqon karto inuu ka dhaqaaqo Los Blancos xili ciyaareedka cusub, kadib mudo dhan 9 sano uu garoonka Santiago Bernabeu ku soo sugnaa.
Khadka dhexe kooxda Atletico Madrid Koke ayaa la hadlay saxaafada kahor kulanka Spain iyo Portugal ee koobka aduunka wuxuuna yiri: “Cristiano Ronaldo waa xidig muhiim ah ee go’aamin kara ciyaarta,
“Si wanaagsan ayuu u garanayaa in kulanka uu farqi kaga sameeyo si uu guul u gaaro, laakiin waxaan rajeeneynaa in ay sameeyin kaga yeelato khilaafka kala dhexeeyo maamulka kooxdiisa”.
“Waa inaan ogaanaa in kooxda reer Portugal uu heysto xidigo aad u wanaagsan aan aheyn kaliya Ronaldo, waa Champions yurub, taas ayaana micnaheedu tahay inay xoogan yihiin.”
Spain iyo Portugal ayaa la filayaa inay ku kulmaan jimcaha kulankooda koowaad group B ee koobka aduunka 2018 khamiista ka daah furmi doono dal qaboobaha ee Russia.
Gareth Southgate oo ku dhawaaqay in Marcus Rashford uu dhaawac ku soo gaaray tababarka xulka qaranka England